के गर्ने बालबालिकालाई स्वस्थ बनाउन ? जानिराखाै - ज्ञानविज्ञान
के गर्ने बालबालिकालाई स्वस्थ बनाउन ? जानिराखाै
हामी चाहन्छौं, आफ्ना बच्चा स्वस्थ होस् । तन्दुरुस्त होस् । तगडा होस् । बलियो होस् । फूर्तिलो होस् । सधै सक्रिय र उर्जावान् होस् । यसका लागि कामना गरेर मात्र पुग्दैन, उनीहरुलाई केही कुरामा अभ्यस्त गराउनुपर्छ ।
बालबालिकालाई शारीरिक रुपमा स्वस्थ बनाउन खासै केही गर्नु पर्दैन । उनीहरुको आहारमा विशेष ध्यान दिएर पनि उनीहरुलाई स्वस्थ बनाउन सकिन्छ । जबकी कयौ अभिभावक यस्ता छन्, जो बच्चाको आहारमा खासै ध्यान दिदैनन् ।
‘आफ्नो बच्चाले खाना राम्ररी नखाएको’गुनासो गर्नमा मात्र समय खर्चिने गर्छन् । यस दौरान बच्चालाई कस्तो आहार दिने भन्ने कुरा समेत उनीहरु विर्सने गर्छन् ।
त्यसबाहेक, कामकाजी आमाबाबुका कारण पनि कयौ पटक बालबालिकाहरु स्वस्थ आहारबाट बञ्चित हुने गर्छन् । उनीहरुलाई बच्चासित बसेर खाने फुर्सद समेत हुँदैन । जबकी कुनै पनि बालबालिकालाई स्वस्थ आहार ख्वाउनु छ भने उनीहरुलाई आफ्नो साथमै राखेर स्वस्थ एवं सन्तुलित खानेकुरा खुवाउनु पर्छ ।
सानो छँदै बालबालिकालाई स्वस्थकर खानेकुरा खान सिकाए भविष्यमा समेत उनीहरुको शारीरिक विकास सही ढङ्गले हुन्छ । यसको लागि सबैभन्दा पहिले उनीहरुलाई स्वस्थकर खानेकुराबारे जानकारी दिन आवश्यक छ ।
कुन खानेकुरामा के के पोषक तत्वहुन्छ, कुन कुन खानेकुरा स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छ भन्नेकुरा बताउन आवश्यक छ । ताकी उनीहरुलाई समेत आहारमा पाइने पोषकतत्वबारे जानकारी होस् । र , यी सबै कुरा जानकारी गराउनका लागि बालबालिकालाई साथैमा राखेर खाना खुवाउन जरुरी छ ।
आफूले पनि खाने
बालबालिकामा स्वस्थ खानेकुरा खाने बानीको विकासका लागि अभिभावकहरुले पनि आफ्नाे खानपानमा सुधार गर्न जरुरी छ । बालबालिकासित जंकफुड खानबाट परेज गर्नुपर्छ । सलाद, फलफूल, सागसब्जी, दही, सूप, आदी खानामा सामेल गर्नुपर्छ । र, बालिकालाई पनि यस्ता खानेकुरा खान प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
स्वाद लिएर खान सिकाउने
खाना पेट भर्नको लागि मात्र नभएर शरीरलाई स्वस्थ राख्न र जिब्रोको स्वाद बढाउन पनि खाने गर्नुपर्छ । स्वाद लिएर खाना खाएमा यसले र्‍यालको निर्माण गर्छ । जसले पाचन प्रणाली चुस्त बनाउनुका साथै एसिडिटी, कब्जियत तथा छाती पोल्ने समस्याबाट छुटकारा दिलाउँछ । त्यसैले, बालबालिकालाई विस्तारै विस्तारै खाना खान प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यसले उनीहरुको शारीरीक विकास राम्ररी हुन्छ ।
खाँदा टिभी र मोबाइल चलाउन नदिने
आजकलका बच्चाहरुमा खाँदा टिभी हेर्ने र मोबाइल चलाउने क्रम बढ्दो छ । जबकी विशेषज्ञहरुअनुसार खाना खाने समय आˆनो पूरा ध्यान खानामा केन्दि्रत हुनुपर्ने बताउँछन् । अन्यथा, टिबी हेरेर खादाँ पेट भरिएको समेत थाहा नभएर बालबालिका ओभर इटिङ्गको शिकार हुने गर्छन् ।
परिवारसँग बसेर खुवाउने
बालबालिकाले समयमा खाना खान्छन् कि खाँदैनन्, पौष्टिक आहार लिन्छन् कि लिदैनन्, खाएपनि कति परिणाममा खान्छन् भन्ने कुरामा अभिभावकहरु सचेत हुनु पर्छ । र, यसको लागि परिवारको साथमा बसेर बालबालिकालाई खाना खुवाउनु पर्छ । परिवारमा बसेर खाना खाएमा बालबालिकाले स्वस्थ आहार खानुका साथै राम्रो संस्कार सिक्दछन् ।
खानेकुरा किन्न वा बनाउन प्रोत्साहित गर्ने
जब बालबालिका खानेकुरा किन्न आफै बजार जान्छन्, तबमात्र उनीहरुले खानाको महत्वबारे थाहा पाउँछन् र, कुन खानेकुरामा कति पौष्टिक तत्व हुन्छ भन्नेबारे जानकारी पाउँछन् । त्यतिमात्र हैन, जब उनीहरुले किनेर ल्याएको खानेकुरा उनीहरु आफै पकाउन थाल्छन्, पकाउन सहयोग गर्छन् तब उनीहरु आफूले तयार पारेको खानेकुरा चाख्न पनि लालायित हुन्छन् ।
पानी पिउन प्रोत्साहित गर्ने
गुलियो पेय पदार्थको अत्याधिक सेवनले बाबालिकामा मोटोपनाको समस्या बढाउन सक्छ । त्यसैले उनीहरुलाई मोटोपनाको समस्या हुन नदिन तथा स्वस्थ रहन बढी भन्दा बढी पानी पिउन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
Topics #बच्चा स्वस्थ #बालबालिका
Don't Miss it यस्ता छन् जाडोमा नियमित कफी पिउनुका फाइदा
Up Next पिसाब रोक्दा निम्तिन सक्छन् यी समस्याहरु, जानिराखौ
11 hours ago biplov
अम्लपित्त (एसिडिटी) भनेकाे के हाे ? यसबाट बच्ने सहायक उपायहरू यस्ता छन् जानिराखाैँ
याे राेग आमाशयमा अम्लिय मात्रा बढ्नाले हुने राेग हाे । फास्टफुडकाे प्रयाेग बढ्दै गएकाे याे समयमा प्राय व्याक्तिमा याे राेग…
एक्लै हुनुहुन्छ हार्टअट्याक भयो, के गर्ने ?
हार्टअट्याकका कारण धेरैले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । हार्टअट्याकले धनी वा गरिव भन्दैन । यो रोगले उमेर पनि भन्दैन ।…
यस्ता कुराहरु खानाले फोक्सो स्वस्थ रहन्छ
फोक्सो स्वास्थ राख्न यस्ता भिटामिन युक्त खाना खानुहोस् । भिटामन सीयुक्त खाना सुन्तला, कागती, निबुवा, मौसम, गोलभेँडाको जुस, स्ट्रबेरी, भुइँकटहर, आँप, पहेँलो…
कुन रोग लाग्दा कुन जुस पिउने ? जानुहोस
उच्च रक्तचाप उच्च रक्तचापका रोगीहरूले गाजर, अंगुर र मौसमको जुस पिउनुपर्छ । अनि शारीरिक र मानसिक आराम पनि गर्नुपर्छ ।…
# लामो आयु हालै गरिएको एक अध्ययनले अबिवाहित पुरुषको तुलनामा बिवाहित पुरुषको आयु लामो हुन्छ । अर्थात तुलनात्मक रुपमा अबिवाहित…
यी ७ चिजहरुसँग मह खाएमा यसले मानव स्वास्थमा नकरात्मक असर पार्न सक्छ
१. तातो पानीः तातो पानीको साथमा मह नखानुहोस् । यसले शरिरमा गर्मी बढाँउछ जसले पेट खराब हुने समस्या आँउछ ।…
केही यस्ता खाने कुराहरुबाट पुरुषहरु सजग रहनुपर्छ
१. टी ट्री लेवडर ओएलः यसको सेवन ज्यादा गर्दा यसले पुरुषहरुको स्तन बढेर महिलाको जस्तै हुनसक्छ । यसको सेवन पुरुषले…
केटि मान्छे मा हुनुपर्ने ३२ गुणहरु
१. पधासनमा बसन बस्दा वृत्तकार ( गोलो ) आसनमा हुनु | २. हातका औला लामा -लामा हुनु | ३.औलाका कापमा…
घरेलु उपचार (33)